Wararka - Koofiyad la xidho waa Dabeecad
Koofiyad la xidho waa Dabeecad
Koofiyad xirashada waa dabeecad
On the Margaret Howell Spring / Summer 2020 runway, waxaan ku aragnay surwaal cufan oo cufan, liimo aad u weyn iyo shaatiyo waajibaad turquoise ah, jardiinooyin fudud oo fudud, iyo suudhadhka feerka. Waxaa laga yaabaa inay ahayd jawiga, laakiin sharaabaadyada surwaalku uma muuqan kuwo aad u xun, sidoo kale in badan oo ka mid ah waxay xirnaayeen bean Flaxkoofiyadaha Taasi waxay soo jeedisay inay wax xun yihiin isla taasi waxay ka dhacday Gucci, halkaas oo Alessandro Michaele astaantiisa ganacsi ee 'hyperrealism' lagu xanaaqay soo bandhigid saqbadh digir koofiyado midabyo laba jibbaaran oo firfircoon iyo neon dhalaalaya.
Digirta koofiyad, oo si adag madaxa ugu dheggan sida faashad, ma aha muuqaal ugub ah kalluumeysatada ama aqoonyahannada, laakiin waa qalab "raaxo leh", waxay u ahayd isha ragga iyo dumarka, jiilaalka ama xagaaga. leh jiinis duug ah ama dhidid hore loo isticmaalay, hadda waxaa lagu xiraa kaarar gacmeed gacmo lagu sameeyay ama dhar nashqadeeyeyaal ah.Howell wax khalad ah uma arko taas; koofiyadaha, sida kabaha oo kale, ayaa dejisa codka dharka, ayay tiri.
Raadinta koofiyadaha loo yaqaan 'beanie koofiyadaha' ayaa cirka isku shareeray sanadkii la soo dhaafay si ay u noqdaan mid ka mid ah koofiyadaha ugu caansan, mana lahan arrimo cabir ah oo dad badan dhibaya. Koofiyadaha loo yaqaan 'beanie' ee loo yaqaan 'silhouette knits iyo hoodies' ayaa noqday qaabka jidadka loo maro. astaamaha iyo isbeddellada moodada ee halista ah waxay u baneeyaan dawaaridda dabacsan iyo iskudhafyada anshax-darrada ah, suudhku mar dambe ma caajisiin laakiin waa shiraac loogu talagalay niyadda qof walba, koofiyad beanie ah oo leh suudna waxay u egtahay sida '80s Armani oo ku labisan funaanad halkii shaati iyo xiro.
Kaliya koofiyadaha beanie, laakiin qaabka 'Chanel's School Girl', oo xushmeeya filimada cusub ee mowjadaha, ayaa sidoo kale leh koofiyad fidsan oo kormuunyo leh. Wave filimada cusub ayaa bixiya aragti gaar ah oo waarta oo ku saabsan haweenka Faransiiska - oo ah caqli-gal indho sarcaad leh timaha pixie, eyeliner dhibic leh, ubax weyn oo casaan ah oo qarka u saaran koofiyad, ama xiranaya xargaha iyo dharka yar yar ee Brittany.1 Waxay noqon doontaa sanadka qalabka, iyada oo runways-yada New York, London, Milan iyo Paris ay ku badan yihiin qaybo shaqeynaya oo la jaanqaadi kara xilli-labbiska xilli-ciyaareed ka dib. Sidoo kale waa hab fiican oo lagu ilaalin karo dharkaaga dharka oo sii jiri kara iyada oo aan lagu dhegin roogga. Ka dib oo dhan, qalabyada, sida "jilicsanaanta jilicsan," waxay abuuri karaan isku-dar ah niyadda iyo qaabka.
n Qarniyadii 19aad iyo horaantii qarnigii 20aad, koofiyaduhu way xirnaayeen dadka noocyada bulshada oo dhan, oo ay ku jiraan kuwa heerarka ugu hooseeya Ilaa Dagaalkii Labaad ee Adduunka, waxaa loo arkaayay wax aan habooneyn in mudane uusan koofiyad xirin. Magacyada koofiyadu sidoo kale waa Koofiyad dabeecad iyo ururo taariikhi ah Koofiyadda loo yaqaan 'Bowler hat' ama 'Derby hat', waxay u egtahay weel foorari ah oo foorara oo waxaa loogu magac daray qarnigii 19-aad ee Ingiriiska oo caan ku ahaa qaabka. Fedora, oo loogu magac daray riwaayad isku magac ah, ayaa ah koofiyad jilicsan oo dusha ka wareegsan iyo gees ballaaran oo la rogrogmi karo.Waa mid uu jecel yahay mudane, kaliya looma isticmaali karo in looga hortago roobka, laakiin sidoo kale waa la laaban karaa oo lagu ridi karaa shandad. nin ku jira “Casablanca” baarayaasha gaarka loo leeyahay “Hurdada Weyn”, Waxay lugeeyaan jidadka New York iyagoo ku duudduuban jaakado qoyan oo xidhan fedoras madow iyo cirro leh.
Qoraa Peter Mayer ayaa mar u maleynayay in koofiyadaha ragga ay yihiin kuwo casri ah oo qurux badan, waxna ka sheegay dabeecadda qofka. Koofiyadu inta badan waa astaan ​​ganacsi oo qofka u eg sida sanku u yahay muuqaalka qofka, ”ayuu ku qoray About Taste.
Daaran " Subax wanaagsan Britain" Sanadkii la soo dhaafey, kooxda martida loo ahaa waxay Trump hadiyad ahaan u siisay - koofiyad Churchillian ah - marti ahaan.Marka uu koofiyadda Trump u dhaqaaqay waxay dhalisay buuq xagga internetka ah, oo u muuqda heer ka duwan khilaafkii lagu eedeeyey inuu ku keenay timahiisa foojignaanta.
Sigaarka, ulolaha, xirmooyinka qoob-ka-ciyaarka iyo dharka hal-labiska ah ayaa dhammaantood ahaa dharkii Churchill, oo noocyadiisa koofiyadaha jilicsan wuxuu siiyay sawir-qaadayaasha xaflad duurjoog ah sannadihii 1920-meeyadii. Sarkaalka dadweynaha agabkiisu waa calaamado gaar ah oo nin waliba barto si uu u raadsado una aqoonsado. Caqliga wejiga Disraeli, qoorta Gladstone, gadhka Lord Randolph Churchill, muraayadaha Chamberlain, tuubada Baldwin - 'hantidan' dhammaantood waa muhiim. Ma lihi mid ka mid ah astaamahan, sidaa darteed sawir qaadayaasha ayaa abuuray halyeeyo koofiyadeyda ah si ay u qanciyaan baahida. "
Halyeeyga, ayuu sharraxay, wuxuu bilaabay xilligii ololaha doorashada 1910. Wuxuu ku sugnaa Southport isagoo lugeynaya xeebta isaga iyo xaaskiisa. "Koofiyad aad u yar oo la dareemay - ma garanayo halka ay ka timid - waxay horay ugu jirtay shandadayda. Waxay saarneyd miiska hoolka ku yaal, anigana waan saaray iyadoo aan laga fekerin. Markii aan ka soo laabannay socodkeenna, sawir qaadaha ayaa yimid oo sawir qaaday. Tan iyo markaas, sawir qaadayaasha iyo wariyeyaasha qormada waxay ka doodayeen koofiyadayda: imisa, sida saxda ah; Qaabkee ayey u qaabeysan yihiin; Sababta aan u sii beddelayo koofiyadeyda; Inta aan ku qiimeeyo, iyo wixii la mid ah. Waa wax aad u xun, dhammaantoodna waxay ku saleysan yihiin sawir."
Laakiin taariikh-yahankii Churchill ee Peter Mendelssohn wuxuu rumeysan yahay in sheekada Churchill ay tahay mid aan run aheyn Churchill oo sifiican ugu xeel dheer dacaayadaha, kuma guuleysan karin inuu ogaado farqiga u dhexeeya koofiyadiisa iyo tan dadka kale. Churchill wuxuu tijaabiyay qaabab badan, laga soo bilaabo koofiyadda sare ilaa koofiyadleyda, tan ugu caansan. Koofiyadda Humboldt waa nooc dhogor dhogor ah oo laga dareemay koofiyad u eg meel farood leh, dhexda lagu xardhay iyo xarkaad satin ah.Waxaa daahfuray Boqor Edward VII oo Jarmal ah Magaalada Bad Homeburg 1880-yadii oo dib loogu soo celiyey England.Churchill wuxuu haystay koofiyadahaas badan, laga bilaabo madow madow ilaa cawl badan oo casri ah oo leh xargaha madow, oo ay ku jiraan koofiyada Humboldt oo lagu iibiyay $ 11,775 markii la xaraashay 1991kii muujinta xarfaha hore ee Churchill.
John F. Kennedy, oo leh qaabkiisa cusub, casriga ah iyo madaxa qaro weyn ee timaha oo si dhif ah loo daboolay, marka laga reebo xaalado dhif ah, wuxuu ahaa koofiyad dhab aher Laakiin sharciyada dumarka hore way ka duwan yihiin, gaar ahaan dadweynaha. Raadinta Google, "Jacqueline Kennedy's Hat" waa ikhtiyaar madaxbanaan, oo loola jeedo Koofiyad yar oo wareegsan oo dusha sare leh, jir aan gacmeed lahayn oo aan lahayn qarka, maxaa yeelay waxay umuuqataa Pillbox. Waxaa sidoo kale loo yaqaan 'Pillbox Hat', oo ka soo jeeda koofiyadaha militariga. Wixii dhacay Janaayo 20, 1961, si taxaddar leh ayaa loo duubay, maaddaama Kennedy uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee dhashay qarnigii 20aad ee khudbad hordhac ah ka jeediya shaashadda telefishanka midabka leh.
Laakiin wax walba sidii loogu talo galay uma socon. Habeenimadii, sideed inji oo baraf ah ayaa ka da'ay Washington, DC, iyo qabowga maalinta xigta, dadka kale ee sharafta leh oo dhan waxay xirnaayeen jubbado mink ah, marka laga reebo Jacqueline. Kaliya maahan daqiiqad qeexan oo ku saabsan xirfadiisa siyaasadeed iyo qaab shaqsiyadeed ee Jackie, waxay sidoo kale noqotay mid ka mid ah muuqaalladii ugu caansanaa ee taariikhda caleema-saarka madaxweynaha. Wixii intaa ka dambeeyay, daboolka sanduuqa dawada ayaa noqday mid soo ifbaxay 1960-kii..
Jacqueline ayaa sidoo kale la sheegay in aysan necbeysan koofiyadaha maxaa yeelay waxay u maleysay in madaxeeda uu aad u weyn yahay, Halston oo ah nashqadeeyaha koofiyadda ayaa ka shaqeysay waqti dheeraad ah si ay u xalliso dhibaatada, ka hor inta uusan siin Jacqueline, wuxuu saaray madaxiisa, wuxuu fariistay inta u dhaxeysa muraayadaha hore iyo gadaal. , oo gadaal iyo gadaalba u rogay si loo hubiyo inay u muuqato inay kaamil tahay dhinacyada oo dhan.Waxay ahayd dabayl aad u daran Jacqueline ayaa soo gaadhay oo koofiyaddeeda xidhatay, iyadoo ka tagtay googoos hoose oo cidina qolka ka dareemin, laakiin ku baahday adduunka oo dhan, laga bilaabo bulshada sare ilaa miyiga Midwest. "Qof kasta oo muuqaalka soo guuriyey wuxuu ku dahaadhay koofiyaddiisa," ayuu Halston goor dambe yiri isagoo qoslaya.
Jacqueline maalintii dilkii JFK, Jacqueline waxay xirtay sharooto sagxad ah oo dusha sare leh oo leh dharka loo yaqaan 'raspberry-pink pink'. Suudka dhiigu ku daatay ayaa lagu xiray National Archives-ka magaalada Maryland waxaana lagu amray in laga qariyo aragtida bulshada ilaa ugu yaraan 2103, koofiyaduna waxay ahayd dib dambe looma arag.
Todobaatameeyadii, markii ay timi timajarayaasha timaha, timuhu waxay noqdeen kuwo ka moodo badan koofiyadaha. Koofiyadaha dalabka suuqa loo dhigo sida qalabka raaxada, halkii loogu talagalay munaasabad gaar ah. Suuqa koofiyadaha waxaa lagu qiimeeyaa qiyaastii $ 15bn sanadkii, sida laga soo xigtay Euromonitor, oo ah shirkad cilmi baaris ku sameysa suuqa - qayb ka mid ah $ 52bn suuqa boorsada gacanta. bannaanka caasimadaha casriga ah, baahida loo qabo koofiyadaha ayaa sii kordhaya.
"Waxay noqotay qaab cusub oo muujinta, nooc cusub oo qaab tattoo ah." Sida ay sheegtay naqshadeeye Priscilla Royer, "koofiyaduhu waxay beddeli karaan muuqaalka qofka, xitaa dabeecadda, sida ugu fudud ee suurtogalka ah." Royer wuxuu xiiseynayaa casriga Koofiyaddu, waxay isku dayeysaa inay jebiso dareenka dhaqan ee koofiyadu mar dareentay nidaamka bulshada. Dhibaatada koofiyadaha badankood la dareemay ayaa ah inaysan sahlaneyn in lala safro, sidaa darteed waxay ka shaqeyneysaa waxyaabo jilicsan oo isku laaban sida dharka iyo siibashada. Bacda dhexdeeda Kadib fikrad geesinimo leh ayay qabatay. Ka waran koofiyadaha halkii ay ka ahaan lahayd dalladaha? Laga soo bilaabo naqshadeynta silhouette ilaa xulashada maaddada si ay u sameyso, waxay aad u jeceshahay xirashada tiara. "Dhaqan ahaan, awooddeeda waa mid soo jiidasho leh."
Waqtiga boostada: Jun-11-2021